Ndị otu Schismatic Movement Unification Movement (2012-Present) - WRSP
MGBE AKWEMKWỌ AKW UNKWỌ
1920 (Jenụwarị 6, kalenda nke ọnwa: a na-echeta ụbọchị a na njem Unification dị ka kalenda ọnwa): Reverend Sun Myung Moon mụrụ na Chŏngju, na North Korea ugbu a.
1943 (Jenụwarị 6, kalenda nke ọnwa: a na-echeta ụbọchị na njikọ Unification dị ka kalenda ọnwa): Hak Ja Han mụrụ na Sinli, na North Korea ugbu a.
1960 (Eprel 11, kalenda nke anyanwụ: ụbọchị a na ụbọchị niile gafere, kalenda anyanwụ): Reverend Moon lụrụ Hak Ja Han, nwunye ya nke abụọ, na Seoul, Korea. A bịara mara ha dịka "Ezigbo nne na nna" na Otu Unification.
1961 (Jenụwarị 27): Ye Jin (Nina) Ọnwa, amụrụ nwa mbụ nke Reverend Moon na Hak Ja Han, amụrụ.
1962 (Disemba 29): Hyo Jin (Stephen) Ọnwa, a mụrụ nwa nke abụọ (na nke mbụ) nke Ezi Ndị nne na nna.
1965 (August 14): Na Jin (Tatiana) Ọnwa, nwa nke anọ nke Ezi nne na nna (ọ bụrụ na anyị gụnye nke atọ, Hye Jin, onye nwụrụ na nwata na 1964) mụrụ.
1966 (Disemba 4): Heung Jin (Richard) Ọnwa, a mụrụ nwa nke ise nke Ezi Ndị nne na nna.
1969 (May 25): Hyun Jin (Preston) Ọnwa, a mụrụ nwa nke asaa nke Ezi nne na nna.
1970 (July 17): Kook Jin (Justin) Ọnwa, nwa nke asatọ nke Ezi Ndị nne na nna, amụrụ.
1976 (July 11): Sun Jin (Salina), nwa nke iri nke Ezi Ndị nne na nna, amụrụ.
1979 (Septemba 26): A mụrụ Hyung Jin (Sean) Ọnwa, nwa nke iri na abụọ nke Ezi Ndị nne na nna.
1984 (Jenụwarị 2): Heung Jin (Richard) Ọnwa nwụrụ n'ihe mberede ụgbọ ala.
1987 (March 31): Hyun Jin Moon lụrụ Jun Sook, ada Reverend Chung Hwan Kwak, otu n'ime ndị okenye kachasị ama ama nke otu Unification.
1996: Reverend Moon malitere Family Federation maka World Peace and Unification (FFWPU), tinyere Reverend Kwak dị ka onyeisi oche.
1998: Hyun Jin Moon ka a họpụtara dịka osote onye isi nke FFWPU.
1998: Nansook Hong, bụ nwunye mbụ nke Hyo Jin Moon, gosipụtara adịghị ike ya na akwụkwọ na-akpali akpali.
2006: Reverend Sun Myung Moon si Seoul gaa n'Ebe Nsọ nke Chung Pyung, ụlọ ihe nkiri nke ihe omimi nke Hyo Nam Kim, nwanyị na-enye mmụọ nke nne nwụrụ anwụ nke nwunye Reverend Moon.
2008 (March 17): Hyo Jin Moon nwụrụ.
2008: Hyun Jin Moon nọchiri ọtụtụ n'ime ndị isi ya na Unification Movement site na nwanne ya nwoke nke nta bụ Hyung Jin Moon, onye ghọrọ onye isi oche nke FFWPU.
2009: Hyun Jin Moon malitere na Manila Global Peace Foundation, dị ka onye ọzọ nwere onwe ya na FFWPU na-achịkwa Universal Peace Federation.
2012: Na Jin Moon gbara arụkwaghịm n'ọkwá ya na Unification Movement mgbe esemokwu ya na nne ya gasịrị, nke ka njọ site n'eziokwu ahụ bụ na mmekọrịta ya na FFWPU onye na-egwu egwu Ben Lorentzen, bịara mara nke ọma. O mechara gbaa di ya, Jin Sung Pak, wee lụọ Lorentzen.
2012 (September 3): Reverend Ọnwa nwụrụ na Chung Pyung, Korea.
2012: Oriakụ Ọnwa bidoro wepụ Hyung Jin Moon na nwanne ya nwoke bụ Kook Jin Moon site n'ọkwá ndị isi ha na otu Unification.
2013: Hyung Jin Moon, site na nkwado nke nwanne ya nwoke bụ Kook Jin, guzobere ctlọ nsọ dị ka nzukọ dị iche na FFWPU.
2015: A họpụtara Sun Jin Moon ka ọ bụrụ onyeisi oche nke FFWPU.
2015: Oriaku Hak Ja Han Moon gbawara Hyo Nam Kim, onye na-agba Chung Pyung, bụ onye malitere ọrụ nke ya.
2016: Ndị na-akwado Hyun Jin Moon guzobere Family Peace Association dị ka nzukọ dị iche na FFWPU.
Reverend Sun Myung Moon, onye bidoro Unification Movement, nwụrụ na Septemba 3, 2012, na Cheung Pyung, Korea. Dị ka ọ na-adịkarị n'òtù okpukpe, òtù ahụ kewara abụọ, ọ bụ ezie na esemokwu ahụ nwere mgbọrọgwụ na ihe ndị mere tupu ọnwụ Reverend Moon.
Esemokwu ndị dị na otu Unification sitere na nkwupụta esemokwu na ikike bụ isi site na (a) Reverend Moon's nwaanyị di ya nwụrụ, Hak Ja Han; (b) Nwa ada nke Reverend Moon, Hyun Jin (Preston) Moon; (c) otu ìgwè mmadụ (“ndị ụkọchukwu”) na-ejide njikwa ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ ndị isi dị iche iche nke Reverend Moon guzobere; (d) nwa nwoke nke ọdụdụ, Hyung Jin (Sean) Ọnwa; na (e) Hyo Nam Kim, onye na-ajụ ase nke na-ekwu na ọ na-enye mmụọ nke nne ọgọ Reverend Moon wee nwee nnukwu ọpụrụiche na njem ahụ.
Reverend Moon (1920-2012) nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị iri na anọ site na alụmdi na nwunye ya na 1960 na Hak Ja Han, nwunye ya nke abụọ mgbe ọ gbara alụkwaghịm Sun-Kil Choi (1925-2008), onye ọ lụrụ na 1945. A na-ezo aka Hak Ja Han na Unification movement dị ka "Ezi Nne," na Ọnwa dị ka "Ezi Nna." A na-akpọ ezinụlọ ha, gụnyere ụmụ ha iri na anọ bụ "Ezi Childrenmụ," dị ka "Ezi Ezinụlọ" na ọrụ ya bụ isi na okwukwe nke njikọ Unification, ebe a na-ewere Reverend Moon dị ka "Adam nke atọ" ("Adam nke abụọ" ịbụ Jizọs Kraịst) (Chryssides 1991).
“Ezi Childrenmụaka” gụnyere ụmụ nwoke asaa na ụmụ nwanyị asaa, nke otu n'ime ha nwụrụ obere oge amụrụ ya na 1964. Ezigbo nwa bụ nwa nwanyị amụrụ na 1961, Ye Jin (Nina) Moon. Nwa nwoke nke mbụ bụ Ezi Child bụ Hyo Jin (Stephen) Ọnwa (1962-2008). Ọfọn tupu 1998, mgbe otu akwụkwọ na-akpali akpali nke nwunye ya bụ Nansook Hong mebiri òtù Unification (Hong 1998), ọ bịara doo anya na Hyo Jin Moon nwere nsogbu onwe ya na ọ bụghị onye ga-anọchi nna ya.
Nwa nwoke nke abụọ nke bụ nwa bụ Heung Jin Moon (1966-1984), nke a na-asọpụrụ na Unification Movement dị ka nwa okorobịa nwere ọchịchọ ime mmụọ dị elu. Egburu ya n'ihe mberede ụgbọ ala mgbe ọ dị afọ iri na asaa. Dị ka nkà mmụta okpukpe Unification si kwuo, Heung Jin Moon na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ụwa ime mmụọ. Na 1988, otu onye otu Chọọchị Unification si Zimbabwe, Cleophas Kundiona, kwuru na ọ bụ anụ ahụ nke Heung Jin Moon ma Reverend na Oriakụ Moon na ndị isi ụka wee nabata ya oge ụfọdụ, tupu ọ bụrụ onye na-ese okwu maka ime ihe ike na enweghị atụ. n'ikpeazụkwa site na mmegharị ahụ.
Ọnwụ nke Heung Jin Moon na nsogbu nke Hyo Jin Moon hapụrụ Hyun Jin Moon dị ka ọkpara nwoke bụ True Child kacha mma. merie nna ya n'ọkwá onye ndu. A mụrụ Hyun Jin Moon na May 25, 1969, na mgbe ọ dị afọ iri na ụma malitere nna ya ịkwadebe ka ọ bụrụ onye ndu n'ọdịnihu na otu Unification. Na Christmas Eve 1986, mgbe ọ dị afọ iri na asaa, Hyun Jin sooro Jun Sook Kwak, onye gbara afọ iri na itoolu n'ụbọchị ahụ. [Foto dị n'aka nri] Ha abụọ lụrụ na Machị 31, 1987 ma mesịa mụọ ụmụ itoolu. Jun Sook bụ ada Reverend Chung Hwan Kwak, otu n'ime ndị okenye a ma ama na otu njikọ Unification na otu n'ime ndị enyi Reverend Moon tụkwasịrị obi n'oge niile ndụ ya.
Nkwadebe maka idu ndú gụnyere ihe ngosi nke Reverend Moon na nwa ya nwoke bụ Hyun Jin, onye na-egwu egwuregwu bọọlụ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, kwesịrị ịgbanwe ọrụ egwuregwu ya na ịnya anyịnya. O mere nke a nke ọma, ọ bụkwa akụkụ nke ndị otu egwuregwu ịgba ọsọ nke Korea na Seoul (1988) na Barcelona (1992) Olympics. Na 1998, Hyun Jin Moon nwetara akara ugo mmụta MBA na Harvard Business School. Ọ nwekwara BA na History na Mahadum Columbia na MRE na Seminary Theological Seminary. Ọ nwere akara ugo mmụta dị nsọ site na Mahadum Sun Moon, mahadum a kwadoro nke Unification Movement na Korea na-arụ ọrụ (nke na-akpọkarị ya "Dr. Moon") yana prọfesọ nsọpụrụ sitere Uni-Anhanguera na Brazil. N'inwe obi ike na nwa ya nwoke, Reverend Moon nyere ya ọrụ ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ebe nke njikọ Unification. O kpebikwara na 2000 na Hyun Jin kwesịrị ịbụ onye mbụ na ụwa iji ketara ya na nwunye ya ikike inye alụmdi na nwunye Ngọzi, sacrament nke Unification.
Na 1994, Reverend Moon kwupụtara njedebe nke oge nke Unification Church na na 1996 malitere Family Federation maka World Peace and Unification (FFWPU), na Reverend Kwak dị ka onyeisi oche. Na 1998, Hyun Jin Moon ka a họpụtara dịka osote onye isi nke FFWPU. Na nnukwu mmemme nraranye na New York, nke ndị isi si gburugburu ụwa bịara, Reverend Moon kwupụtara na nwa ya nwoke ga-arụzu ọrụ ya ma rụọ nnukwu ọrụ karịa onwe ya, na-ezo aka Hyun Jin dị ka mmezu nke "Ọchịchị atọ Atọ" (abụọ ọgbọ nke ezinụlọ sitere na Chineke) na “Adam nke Anọ.” Nhọpụta nke Hyun Jin Moon na ịpụ na Chọọchị Unification na Family Federation mere ka nzukọ ahụ nwee isi, ebe a tụgharịrị ya dị ka mgbanwe mgbanwe sitere na "ụka" gaa na "mmegharị," ya bụ site na otu ịrọ òtù na onye na-abụghị nke ọgbakọ nlereanya, ọ bụkwa ihe ọmụmụ seminal maka esemokwu dị iche iche nke sochiri. O kpughere ihe ụmụazụ Hyun Jin mechara hụ dị ka ebumnuche Reverend Moon iji nyefee nwa ya kachasị mma na ọ bụghị nwunye ya, na ịghasa ihe nketa ọ bụla nke usoro iwu site na oge Unification Church.
N’agbata afọ 2000 na 2001, Hyun Jin Moon ghọrọ onye isi oche nke ndị otu Collegiate Association for the Research of Principles (CARP) na ndị ntorobịa Federation maka udo ụwa. Na 2001, o hibere Service for Peace. Na 2006, ọ ghọrọ onye isi oche nke UCI, ụlọ ọrụ na-enweghị ọrụ na United States nke na-achịkwa ụfọdụ akụ. Na 2007, ọ ghọrọ onye isi oche nke Universal Peace Federation wee malite ịhazi Global Peace Festivals.
Nkwenye Hyun Jin Moon banyere ọnọdụ ndị a niile bụ akụkụ nke mbọ Reverend Moon mere iji kwatuo usoro chọọchị nke afọ iri anọ gara aga na ịnyefe isi ọnọdụ na Unification movement na "1.5 ọgbọ," nke gụnyere ndị isi na-eto eto na ha iri anọ. Ọnwa kwenyere na nwa ya nwoke bụ Hyun Jin, na ya onwe ya so n'ọgbọ a, ga-achịkwa ndị isi tọrọ n'ụzọ dị mfe. N'ezie, ha guzogidere ikike na mgbanwe Hyun Jin, katọrọ ya Reverend Moon dị ka ihe na-ekwekọghị ekwekọ, ma mesịa mebie mmekọrịta Hyun Jin na ndị mụrụ ya.
Onye prọfesọ Seminary Theological Seminary na ọkà mmụta nke Unification movement Mike Mickler, ya onwe ya bụ onye otu alaka ụlọ ọrụ Oriakụ Moon nke na-emegide Hyun Jin Moon ugbu a, kwenyere na nke ikpeazụ a gosipụtara uru Reverend Moon kwuru na post-1994 na nke a bụ "ọ bụghị chọọchị mana mkpakọrịta, ”ọ bụ ezie n'eziokwu ebumnuche nke onye Ọchịchị bụ ịkwado" esemokwu okike "n'etiti ndị okpukpe na ndị na-abụghị ndị otu. Mgbe, Mickler na-arụ ụka, na ntọala nke Chung Pyung shrine na njikọta nke onwe ya na nwunye ya dị ka Eze na Queen nke Udo, Reverend Moon kwusiri ike ọzọ n'okpukpe, ịhapụ nwa ya nwoke bụ Hyun Jin ghọrọ ihe a na-apụghị izere ezere (Mickler 2013, 48 -50). Hyun Jin, n'aka nke ọzọ, na-aga n'ihu na-ekwusi ike na nna ya ebughi n'uche ịchọta okpukpe yana na emume echichi bụ iji chie eze nke Chineke site n'aka ndị nnọchi anya ụwa kama ịlaghachi na ntụgharị uche.
Ruo 2008, Hyun Jin Moon bụ onye a maara dị ka onye ga-anọchi ọnwa Reverend Moon. Site mgbe ahụ gaa n'ihu, mmekọrịta ya na ya nne na nna na ụmụnne gbanwere n'ụzọ dị egwu. N'afọ ahụ, nne ya na ụfọdụ ụmụnne ya mere mgbanwe dị iche iche nke ndu na mkpọsa nkwukọrịta iji mebie aha na ịdị mma Hyun Jin n'ime otu Unification. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ nwanne ya nwoke nke obere bụ Hyung Jin Moon dochiri ya n'ọtụtụ ọnọdụ ya. Nwunye nna ya, Reverend Kwak, ka ekwutọkwara ya, ma manye ya ịhapụ ọgbakọ niile nke Hak Ja Han na-achịkwa. A bịara mara Hyung Jin dị ka pastọ ọnwa ma bụrụ onye isi ala nke FFWPU. E nyere nwanna ọzọ ọnọdụ ọzọ, Kook Jin (Justin) Ọnwa. A mụrụ nke ikpeazụ na 1970, ọnwa iri na anọ mgbe Hyun Jin gasịrị.
N'ime usoro usoro oge nke "Ezi Childrenmụaka," onye na-esote ya bụ Kwon Jin Moon (1975), bụ onye rụrụ ọrụ ọtụtụ afọ dị ka onye na-eme ihe nkiri na usoro TV a ma ama n'okpuru aha Nathaniel Moon, ma ọ naraghị ruo n'oge na-adịbeghị anya mmasị pụrụ iche na mmekorita nke Unification, site n'aka Young Jin Moon (Philip, 1978-1999). Ọ bụghị onye egwuregwu na ọgụ na-aga n'ihu yana na 1999 nwụrụ site na igbu onwe ya ma ọ bụ na-ada na mberede site na ala nke iri na asaa nke ụlọ nkwari akụ Las Vegas. Pastọ Hyung Jin (Sean) Ọnwa a mụrụ na 1979 ma bụrụ nwa nwoke ikpeazụ nke Reverend Moon.
Reverend Moon enweghị ike ịchọta nwa ya nwoke bụ Hyun Jin na ndị isi ndị ọzọ mgbe ọ kwagara afọ iri asatọ na isii na 2006 site na Seoul gaa Ala Nsọ nke Chung Pyung, ihe nkiri nke ihe omimi nke Hyo Nam Kim. Chung Pyung bụ ebe anaghị adị mfe ịnweta ma dịpụrụ adịpụ site na azụmahịa nke na-agba ọsọ ahụ. Onye na-ajụ mmụọ ahụ nyere mmụọ nke nne nne Ja Ja Han nwụrụ, n'oge na-adịghị anya-Ae Hong (1914-1989). Hyo Nam Kim kwenyere na ezinụlọ Moon na ezinụlọ ha nwere mkpa ime mmụọ na aka ha, n'adabereghị na Reverend Moon. Ihe ngosi nke Kim kwupụtara ọkwa ọha nke Han mechara nwee ikike na nkwado dị mkpa.
Ọbụna tupu 2006, Hyun Jin Moon dọrọ aka ná ntị ugboro ugboro na ọ ga-ekwe omume ọdịda nke onye na-ajụ ase. N'ikpeazụ, onye na-ajụ ihe na Oriaku Ọnwa kewara ụlọ ọrụ na 2015, na-agbaso nkwupụta nke Kim na-ezigara Reverend Moon, yana onye na-ajụ onye ọzọ ka a mụrụ ọzọ, nke ga-emesịa kpọkọta ụfọdụ ndị na-eso ụzọ n'etiti ngalaba Japanese nke Unification.
Site na nkwenye ọha na eze nke Hak Ja Han dị ka onye nketa dị ka Reverend Moon, ozugbo ọ chere na ọ bụ onye ndú nke FFWPU na 2008, Hyung Jin (Sean) Moon malitere ịkọwapụta usoro ezinụlọ nke FFWPU ma weghachite usoro ahụ dịka Chọọchị Unification (ma ọ bụ "Unificationism ”Dị ka okpukpe), na-egosi ọzọ Unification Movement na usoro okpukpe na nke ịrọ òtù nwanne ya nwoke bụ Hyun Jin megidere. Hyun Jin kwuru na, na njedebe nke oge nke Unification Church na 1994, ọ kwesịrị ịpụtaara mmadụ niile, gụnyere ụmụnne ya, na Reverend Moon achọghị ịmalite okpukpe ọhụrụ kama ọ bụ nnukwu ezinụlọ zuru ụwa ọnụ.
N'etiti 2006 na 2013, dabere na mmetụta nke Ja Ja Han, Kook Jin Moon ka enyere ego nke mmegharị ahụ. E zigara nwanne nwanyị nke okenye, In Jin Moon (Tatiana, nke a mụrụ na 1965) na US iji mee ka ọrụ Hyun Jin Moon, onye bi ebe ahụ belata. Mgbasa ozi na-akatọ Hyun Jin na ikpe maka ịchịkwa US na akụ ndị ọzọ nke Unification Movement soro, ma edobebeghị ya. Na 2012, ka o sina dị, Tatiana gbara arụkwaghịm n'ọkwa ya na otu Unification mgbe esemokwu ya na nne ya, Oriakụ Moon mere ka njọ site na nkwupụta ihu ọha na, n'agbanyeghị na ya na Jin Sung Pak lụrụ, o nwere mmekọrịta ya na onye ọkpọ egwu nke Family Federation. Ben Lorentzen na ọ bụ nna nwa ya nwoke nke isii, Erik. Ka oge na-aga, Tatiana gbara di ya alụkwaghịm wee lụọ Lorentzen, onye nke gbara alụkwaghịm nwunye ya bụ Patricia, na 2013, n'ememe na-abụghị ụka. Mgbe e mesịrị, ya na nne ya dịghachiri ná mma.
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe dị mkpa n'ịkwalite ụmụ ya ndị nwoke abụọ, bụ pastọ Hyung Jin na Kook Jin, Oriakụ Moon wepụrụ ma n'ọnọdụ dị iche iche na 2012 na 2013, ụmụnne abụọ a wee mepụta otu onwe ha nke akpọrọ World Peace and Unification Sanctuary Chọọchị. Mụ nwoke abụọ ndị a ka na-ekwugide nkwupụta ya na ikike kachasị dị ka nkwulu.
Na 2009, Hyun Jin Moon kpebiri ịmalite na Manila Global Peace Foundation (GPF) dị ka ihe ọzọ na Universal Peace Federation (UPF), nzukọ nke na-agbasawanye ma na-abụghị nke ụka nke Reverend Moon guzobere. Hyun Jin kwuru na nke a anaghịzi echekwa ihe mbụ ahụ na-abụghị nke okpukpe dị ka ihe ngosi nke nwanne ya nwoke bụ Hyung Jin kwuru dị ka Onyeisi nke UPF. Malite na 2010-2011, Hyun Jin Moon kwagara n'ógbè Seattle na ndị na-eso ụzọ ya malitere "ọ bụghị ụka ma mkpakọrịta" n'ụdị Ezinyere Ezinyere Obodo, emesịa Ndị Ezinụlọ Na-agọzi. Na 2016, Nzukọ Udo Ezinụlọ (FPA) ka e hiwere dị ka mbọ Hyun Jin iji dochie nzukọ mbụ nke Rev. Sun Myung Moon (Family Federation for World Peace and Unification - FFWPU) guzobere. Hyun Jin kwenyere na ndị nke a ahapụla ọrụ ya, nke na-abụghị nke ịrọ òtù nke ịghọta ọdịiche nke Chineke, ọha na eze na-agbaso ụkpụrụ omume, ka nne ya, nwanne ya nwoke Hyung Jin, na ndị ụkọchukwu tụgharịrị site na nzube mbụ ya. Fọdụ ndị isi na akụkọ Unification, dị ka Chung Hwan Kwak na onye isi oche mbụ nke ndị otu Japan Unification Takeru Kamiyama (1942-2016), yana ndị isi ndị ọzọ, kwadoro Hyun Jin.
Ndị isi na-achịkwa FFWPU na-akwado ọha na eze, mgbe Reverend Moon nwụsịrị, nkuzi nke Oriakụ Moon bụ "Otu nwa nwanyi nke Chineke muru" na na o nwere ikike di elu. N'ụzọ dị iche na Peacetù Na-ahụ Maka Udo Ezinụlọ kwenyere na ikike ime mmụọ kachasị na Unification movement bụ okenye Ezi Nwa, ya bụ Hyun Jin Moon, dị ka nna ya kwuru na Hyun Jin's 1998 onye isi oche. N'aka nke ọzọ, ctka Sanctuary na-amata Hyung Jin Moon dị ka onye nọchiri Reverend Moon na "eze ọhụrụ nke Cheon Il Guk" (Korea maka "Alaeze Chineke"), ya na nwunye ya dịka Nwanyị ọhụrụ, dabere na ntinye aka ya na ememe nnabata nke 2009 nke ndị mụrụ ya haziri. [Foto dị n'aka nri] Hyung Jin na-ahụ echichi ndị a dị ka ndị nwere mkpa ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke gosipụtara ya Iwu nke United States nke Cheon Il Guk, nke dị na Nkeji edemede 1 na-ekwu na "Eze Cheon Il Guk (CIG) bụ isi nke United States nke CIG. Edere ya ọbụbụeze n'aka Onye-nwe nke ọbịbịa nke abụọ nke ọnwa Sun Myung [Eze nke mbụ] nye nwa ya nwoke bụ Hyung Jin dịka Eze nke abụọ, wee nyekwa Moon Shin Joon [nwa Hyung Jin, nke amụrụ na Machị 22, 2004] dịka Eze nke atọ. ”(World Peace and Unification Sanctuary Church 2015: 6). FPA, n'aka nke ọzọ, na-ekwusi ike na ọbụbụeze n'Alaeze Chineke bụ naanị nke Chineke nakwa na ọ dịghị mmadụ dị mkpa ka ọ bụrụ onye ogbugbo.
Enwere isi okwu ndi nkuzi ise di na FPA, FFWPU, na Church of Sanctuary. FPA na-ekwusi ike na ọdịiche dị na ozizi, ọ bụghị naanị okwu banyere idu ndú na ikike, bụ isi ihe kpatara schism na Unification Movement. Chọọchị Sanctuary na-akwado ọdịiche nke nkà mmụta okpukpe FFWPU, na-anọchi naanị isi iyi nke ikike na njem ahụ na ịjụ nkwupụta Oriakụ Moon na-arụ ọrụ pụrụ iche dịka "nwa nwanyị Chineke mụrụ naanị ya."
Nke mbu, FPA na Sanctuary Church kwenyere na iwu nke Akwụkwọ Nsọ, nke Reverend Moon kwuru, bụ nke a na-apụghị ịgbanwe agbanwe. Ha na-akatọ Oriakụ Ọnwa na FFWPU maka iji dochie mpị asatọ niile na nke atọ, gụnyere mbipụta ọhụrụ nke Cheon Seong Gyeong (akụkọ ọdịnala nke ozizi Reverend Moon), nke ha na-ekwu na pasent iri asaa na asatọ nke ọdịnaya mbụ na-efu. Na mgbakwunye, FFWPU akatọla FFWPU maka iwepụ olu 594 gaa n'ihu nke mpịakọta 615 na-achịkọta okwu Reverend Moon na maka iweghachi ha, mgbe ehichapụsịrị ụzọ dị oke egwu nke Oriakụ Moon ma ọ bụ na-agba akaebe n'ụzọ dị mma maka ọrụ Hyun Jin Moon. Na ngwụcha, ọdịiche ahụ metụtara ọzọ ọrụ Oriakụ Ọnwa na ikike ya ịgbanwe akwụkwọ nsọ na Akwụkwọ Nsọ, nke FPA na ctlọ Nsọ Sanctuary hụrụ na ọ bụghị naanị na-enweghị isi, ma na-emegide okwu Reverend Moon kwuru na ọ hapụrụ “akwụkwọ asatọ na ịkụziri ụmụ mmadụ ihe iji ruo mgbe ebighị ebi ”na-enweghị ntakịrị mgbanwe. Otú ọ dị, FPA na-ekwusi ike na Reverend Moon kwere ka ebipụta mkpokọta nke okwu ya, mana na ha ekwesịghị ịgbanwe ihe ndị mbụ.
Nke abuo, n'adịghị ka FFWPU na Chọọchị Sanctuary, FPA na-ahụ dị ka ntọala ntọala maka uto ime mmụọ na mmepe nke ezinụlọ, ọ bụghị ụka, ndị isi ma ọ bụ ndị ụkọchukwu. FPA na-emesi ọrụ dị iche iche nke onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ike, yana nke nwoke na nwanyị, dị ka isi nke nkuzi nke Sun Myung Moon na ụkpụrụ bụ isi nke okike. FPA na-ekwusi ike na, ugbu a, FFWPU n'okpuru nduzi nke Oriakụ Moon na-agbagha isi ụkpụrụ a. Oriakụ Ọnwa, dịka “Ezigbo Nne” kwesiri ịbụ ebe etiti ịdị n’otu na “Ezi Ezinaụlọ,” mana, FPA na-ekwu, na ezinaụlọ nọ na ndakpọ ugbu a n’ihi nleghara anya ọkwado ọrụ ya dị ka nne na nkuzi okpukpe ọhụrụ na ọ bụ “nwa Chineke mụrụ naanị ya.” Ka ọ dị ugbu a, Chọọchị Sanctuary na-ekwusi ike zuru oke nke Hyung Jin Moon dị ka "Eze nke abụọ nke Cheon Il Guk" na otu ngwa ọrụ dị n'ụwa nke Chukwu na nna ya e mere ka ọ dị mma.
Nke ato, FPA na-atụgharị uche nkuzi Reverend Moon n'echiche bụ na, ọ bụ ezie na ya na Oriakụ Ọnwa bụ ndị nne na nna mbụ, n'ikpeazụ ndị di na nwunye niile a gọziri agọzi nwere ike bụrụ ezigbo nne na nna, yana mmekọrịta chiri anya na Chineke. FPA na-ebo Oriakụ Moon na Hyung Jin Moon ebubo na ha mepụtara akụkọ ifo okpukpe ebe ezinụlọ ndị a gọziri agọzi enweghị ike ịkọwa Chineke na ya naanị site na mgbasa ozi nke "edo" Reverend na Oriakụ Moon. Chọọchị Sanctuary na-ekwusi ike na ọnọdụ Chukwu nke Reverend Moon dị ka "otu mmụọ ahụ" dị ka Jizọs Kraịst, ndị otu a kwenyere na Hyung Jin Moon ịbụzi "arịa" ụwa nke Chineke na Reverend Moon dị nsọ mgbe nke ikpeazụ "laghachiri" laghachi na isi nke Chukwu ”(World Peace and Unification Sanctuary Church 2017).
Nke anọ, onye kwesịrị iduzi Unification Movement bụkwa okwu na-ese okwu, dị ka nkọwa zuru ezu n'okpuru ngalaba Nzukọ / Onye isi nke profaịlụ a.
Nke ise, dị ka e kwuru na mbụ, FPA anaghị achọ ịbụ ụka kama ọ bụ mmegharị nke ezigbo ezinụlọ, ọ bụghị ndị niile nwere otu nkwenkwe okpukpe na otu omume. N'aka nke ọzọ, ndị isi FPA, yana ndị otu Sanctuary Church, kenye ụfọdụ echiche banyere ọrụ onye Mesaịa nke Reverend Moon na agbụrụ ya, ma were mkpa nchekwa nke ọtụtụ emume mbụ nke Reverend Moon guzobere.
Eziokwu ahụ bụ na nkwenkwe ndị dị oke mkpa banyere Reverend Sun Myung Moon bụ (akụkụ ụfọdụ ma ọ bụghị kpamkpam) nke alaka atọ ahụ (FFWPU, FPA na Chọọchị Sanctuary) nwere ike ịtọhapụ ha. Hyun Jin nwere njide karịa nwanne ya nwoke, Hyung Jin. bụ onye duziri ọgụ ihu ọha megide Oriakụ Moon. Hyun Jin degara nne ya akwụkwọ ugboro ugboro (Ọnwa 2008, 2009, 2011, 2013) wee soro ya nwee nzukọ, na-ewepu nkwekọrịta. Agbanyeghị, echiche mmụta mmụọ ọhụụ gbasara Oriakụ Moon dị ka “otu nwa nwanyị Chukwu mụrụ naanị ya” na nkwado Oriaku Moon maka ikpe a na-eme megide nwa ya nwoke bụ Hyun Jin na-eme ka mmekọrịta dị oke egwu.
Maka ịtụle ọdịnihu, e kwesiri ịtụle Ezi nwa ọzọ: Sun Jin (Salina) Ọnwa, amụrụ na 1976, nwa nwanyị nke anọ nke Reverend na Oriakụ Ọnwa. [Foto dị n'aka nri] Oriaku Moon hiwere ya na 2015 dị ka onye isi ala nke FFWPU ma na-ejekwa ozi dị ka onye isi oche nke Kansụl Kasị Elu nke FFWPU. A ga-ahụ ka ọ ga-esi metụta ndị isi FFWPU na-abụghị Ezi Ezinụlọ yana ụmụnne ya ndị nkwenye.
Ma FFWPU na FPA na-edobe emume ọdịnala na sacraments nke Reverend Moon kwuru. FPA na-ekwusi ike na nghazi “omenaala” ma ju aju mgbanwe nile nke Oriaku Moon webatara mgbe di ya nwuru dika onye ojoo. Mgbanwe ndị a na-emesi ọrụ Mizin nke aka ya dị ka “ada ọ mụrụ naanị nke Chineke.”
Chọọchị Sanctuary na-ejikwa emume ọdịnala na sacramenti nke mbido Unification Movement, wezuga mgbanwe ndị Oriakụ Moon webatara. Otú ọ dị, ọrụ ya dị nso na ọdịnala Protestant na Evangelical na Pentikọstal, na okwu izizi na-esote ya site na abụ ndị a na-esite na nna nna egwu nke American Evangelicalism, ọ bụ ezie na ụfọdụ sitere na mmalite ụbọchị nke Reverend Moon. Nke ikpeazu, na oke ọrụ ya, ka a na-eme n'ememe ọzọ na ekpere ikpe-azụ.
Dika o mere na otutu ndi otu okpukpe (nke Sunni-Shia nkewa batara ozugbo), esemokwu di n'etiti alaka di iche di kwa n'etiti usoro na ndi isi ochichi. FPA na-ekwusi ike na ikike a na-ebugharị site na agbụrụ nwoke, ya bụ site na Reverend Moon na nwa ya nwoke nke okenye. Ọ na-ekwusi ike ọrụ dị mkpa nke "usoro ọmụmụ nke etiti" nke na-esite na "Ezi Ezinụlọ" nke Reverend na Oriakụ Moon. A na-ahụta ezinụlọ nke etiti a ka ha nwee ihe ịga nke ọma n'ịmebe ezinụlọ Chineke, ebe ezinụlọ nke Adam na Iv dara. Ọzọkwa, FPA na-ekwusi ike na nkwado ziri ezi dị n'uru; oburu na onye ogugu di nkpa gha adighi nma, ikike gabigara onye ozo, dika nhọputa nke Chineke na nnabata nke ndi mmadu, na nmezu nke oru ndi mmadu. FFWPU, n'aka nke ọzọ, webatara (na 2014), mgbe onye guzobere ọnwụ, a Cheon Il Guk Constitution inye ike niile na Kansụl Kasị Elu nke Chọọchị. FPA boro FFWPU ebubo iwepụ ọrụ nke usoro ọmụmụ ka ọ bụrụ ihe na-enweghị isi na ịzọda ụkpụrụ nke ọrụ mmadụ, nnwere onwe na mkpebi onwe ya site na iwu ochichi nke onwe ya. Ndị ụkọchukwu nọzi n'ọnọdụ a Iwu ijide ikike kachasị elu, nke karịrị ikike nke Ezi Childrenmụaka, ọ bụrụ na Hak Ja Han dị afọ iri asaa na atọ ma ọ bụ nwụọ.
Ka ọ dị ugbu a, dabere na nkuzi nke Reverend Moon na ụfọdụ ọmụmụ ihe ọmụmụ Akwụkwọ Nsọ n'oge ọ gachara, Chọọchị Sanctuary gosipụtara ikike nke Hyung Jin Moon, nke ndị mụrụ ya nwetara site na nhọpụta. Chọọchị Sanctuary na-ekwusi ike na ndị nne na nna jụrụ ọkpara bụ Hyun Jin nakwa na a họpụtara nwanne nwoke nke obere Hyung Jin n'ọnọdụ ya. Site n'akụkụ ya, FPA na-ahụ okwu Reverend Moon na-emegiderịta onwe ya n'okwu banyere inwe dị ka ihe akaebe na ndị ezinụlọ ya na ndị isi ụka na-achịkwa ya n'ụzọ siri ike na afọ ikpeazụ ya ịjụ nwa ya nwoke nke okenye wee nwee mmasị na nke obere.
Na Nwada Hyo Nam Kim, [Foto dị n'aka nri] ikike dị n'aka onye na-ajụ onwe ya, onye ekwenyere na ọ ga-enye Reverend Moon na zipụ ozi ya site na ụwa mmụọ.
O siri ike ịtụle ndị otu alaka dị iche iche. FFWPU na-azọrọ ihe dịka ndị otu 50,000 n’ụwa niile. Chọọchị Sanctuary kwuru banyere 10,000, nke gụnyere gụnyere ndị na-agbaso ọrụ ya site na weebụsaịtị ya, ọnụ ọgụgụ dị elu karịa ndị isi ya. FPA nwere ụfọdụ ndị isi 2,000 na ụwa niile. Enwere ike ime atụmatụ ụmụ nwanyị Hyo Nam Kim na otu narị otu narị. Ọtụtụ obere esemokwu ndị ọzọ dịkwa.
O siri ike ịkọ otú ọnọdụ nke Unification Movement ga-esi gbanwee, ọkachasị mgbe Oriakụ Ọnwa nwụrụ. Na mgbakwunye na otu schismatic dị iche iche a tụlere ebe a, enwerekwa obere esemokwu ndị na-anaghị asọpụrụ isi atọ ọ bụla dị ka nke ziri ezi.
Ndị omekome na-aga n'ihu na-ajụ Unification Movement n'ozuzu ha dị ka "òtù nzuzo," ebe na South Korea ma FFWPU na FPA enwetala iwu ziri ezi site na mmemme ọdịbendị ha, agụmakwụkwọ, na mmekọrịta ha. Hyung Jin Moon na Chọọchị Sanctuary emeela esemokwu ọhụụ na mkpebi ha ịkwado onwe ha dịka akụkụ nke ikike okpukpe America. Ha Iwu nke United States nke Cheon Il Guk bụ akwụkwọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. N'adịghị na nkwupụta ya na ekwesịrị ịnakwere Hyung Jin dị ka eze nke steeti messianic n'ọdịnihu, akwụkwọ a bụ ụdị nke Iwu Iwu America emezigharị, na-ekwusi ike na mkpa onye ọ bụla karịa steeti na nke steeti na gọọmentị etiti. N'ozi okwu ya, Hyung Jin na-akwado ikike nke ndị ụkọchukwu na ụka iji kwurịta okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihu ọha, na-akatọ ihe ọ na-ahụ dị ka ọchịchọ ndị socialist nke ndị America ekpe na nke ọtụtụ ụka ndị bụ isi, ma na-eto Donald Trump na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka nri Europe dịka Marine Le Pen dị ka ngwa Chukwu maka imeri “liberalism” mba ụwa niile nke Sanlọ nsọ dị elu na-ewere dị ka ngosipụta nke ọchịchị Setan.
Image # 1: Njikọ nke Hyun Jin (Preston) Ọnwa na Jun Sook Kwak, Christmas 1986.
Foto # 2: Hyun Jin Moon na Oriaku Hak Ja Han Moon.
Foto # 3: Hyung Jin (Sean) Ọnwa na nwunye ya.
Foto # 4: Hyo Nam Kim.
Image # 5: Sun Jin (Salina) Ọnwa.
Chryssides, George. 1991. Ọbịbịa nke Sun Myung Ọnwa. Basingstoke na London: Macmillan.
Hong, Nansook. 1998. Na Onyunyo nke Ọnwa: Ndụ m na Reverend Sun Myung Moon's Family. Boston na New York: Little, Brown, na Companylọ ọrụ.
Mickler, Michael L. 2013. "Post-Sun Myung Moon Unification Church." Pp. 47-63 n'ime Nyochagharị na Mgbanwe dị iche iche na New Movements, nke Eileen Barker dere. Farnham, UK na Burlington, VT: Ashgate.
Ọnwa, Hyun Jin. 2013. Akwụkwọ ozi si n'aka Hyun Jin Moon ka ezinaụlọ niile a gọziri agọzi na nzube nke ụbọchị ntọala, Febụwarị 12, 2013. Seoul: Kọmitii Mbipụta Okwu nke Hyun Jin Moon.
Ọnwa, Hyun Jin. 2011. Akwụkwọ Hyun Jin Moon na Community Unification Worldwide, November 26, 2011.
Ọnwa, Hyun Jin. 2009. Akwụkwọ ozi si n'aka Dr. Hyun Jin P. Moon na Nduzi Udo Universal (UPF), November 4, 2009. Seoul: Kọmitii Mbipụta Okwu nke Hyun Jin Moon.
Ọnwa, Hyun Jin. 2008. Akwụkwọ Ozi Pụrụ Iche nke Hyun Jin Moon degaara Ezi Ndị nne na nna, Machị 23, 2008. Seoul: Kọmitii Mbipụta Okwu nke Hyun Jin Moon.
Chọọchị Dị Nsọ na Udo nke Worldwa. 2017. “Jizọs Kraịst na Ezi Nna ahụ Bụ Otu Mmụọ?” Nweta site na https://www.youtube.com/watch?v=FwK9oazOqZc na 27 February 2017.
Chọọchị Dị Nsọ na Udo nke Worldwa. 2015. Iwu nke United States nke Cheon Il Guk. Newfoundland, PA: Chọọchị Udo na ificationdị n'Otu Worldwa.